समाचार - जब यो चकलेट को लागी आउँछ, यो सबै समय को बारे मा छ!
के चकलेटले तपाइँलाई मोटो बनाउँछ? यसमा कुनै शंका छैन जस्तो देखिन्छ। उच्च चिनी, बोसो, र क्यालोरी को एक प्रतीक को रूप मा, एक्लै चकलेट एक dieter भाग्न को लागी पर्याप्त जस्तै लाग्छ। तर अब हार्वर्ड युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले पत्ता लगाएका छन कि हरेक दिन सही समयमा चकलेट खाँदा तौल बढ्नको सट्टा बोसो कम गर्न र रगतमा चिनी कम हुन सक्छ।
अघिल्लो अध्ययनहरु चकलेट खाने बानीहरु र लामो समय को वजन को बीच एक dosedependent सम्बन्ध पाएका छन्, विशेष गरी postmenopausal महिलाहरु मा, जो अधिक वजन प्राप्त गर्ने संभावना छन्। यसबाहेक, "अनुपयुक्त" समयमा चकलेट को रूप मा उच्च ऊर्जा र उच्च चीनी खानाहरु को खाना शरीर को circadian प्रणाली र चयापचय गतिविधि लाई प्रभावित गर्न सक्छ, मोटापा को एक बढि जोखिम को लागी अग्रणी।
विभिन्न समयमा चकलेट को खपत को प्रभाव पत्ता लगाउन को लागी, शोधकर्ताहरु १ post postmenopausal महिलाहरु संग एक अनियमित नियंत्रित क्रसओवर परीक्षण आयोजित। मुक्त खाने अवस्थामा, बिहान (MC) र बेलुका (EC) समूहहरु बिहान उठ्ने एक घण्टा वा एक घण्टा भित्र 100g दूध चकलेट (लगभग 542 क्यालोरी, वा दैनिक ऊर्जा सेवन को 33%) उपभोग गरे। राती सुत्नु भन्दा पहिले; अर्को समूहले चकलेट खाएनन्।
दुई हप्ता पछि, महिलाहरु बिहान र साँझ समूह मा कुनै महत्वपूर्ण तौल बढेको थियो, जे होस् चकलेट कैलोरी थपिएको थियो। र महिलाहरु को कमर लाईनहरु जब उनीहरु बिहान चकलेट खाए।
यो थियो किनभने चकलेट को सेवन भोक र मीठो दाँत cravings कम (पी <. additional="" and="" but="" chocolate="" compensate="" contribution="" did="" during="" ec="" energy="" for="" free="" fully="" intake="" kcal="" mc="" not="" of="" reduced="" the="">
प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट विश्लेषणले देखायो कि दुई समय बिन्दुहरुमा चकलेट को खपत फरक microbiome वितरण र प्रकार्य (पी <. and="" days="" ec-induced="" episode="" episodes="" had="" heat="" in="" lower="" maps="" mcs="" minutes="" more="" p="." records="" regular="" showed="" sleep="" temperature="" than="" that="" variability="" vs.="" were="" wrist="">
त्यो हो, बिहान वा रातमा चकलेट खाना भोक, भूख, सब्सट्रेट अक्सीकरण, उपवास रगत ग्लुकोज, माइक्रोबायोम रचना र प्रकार्य, निद्रा र तापमान ताल मा फरक फरक हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, चकलेट मा आहार फाइबर, जो रोकथाम र कब्ज छुटकारा, पुराना मेटाबोलाइट्स निर्वहन गर्न को लागी शरीर को प्रचार, झुर्रीहरु र दागहरु लाई रोक्न, र छाला सौन्दर्य को लागी एक राम्रो वातावरण बनाउन सक्छ।
तेसैले, सही समयमा चकलेट खाने, न केवल बोसो हुनेछ, तर पातलो हुन सक्छ। तर "मात्रा गुणस्तर को लागी जान्छ," र यदि तपाइँ धेरै धेरै चकलेट खानुहुन्छ, परिणाम उस्तै हुन सक्दैन।